Daawo: Jawaari Oo Raali Gelin U Diray Madaxweynaha Jabuuti - Caasimada...
Daawo: Jawaari oo raali gelin u diray madaxweynaha Jabuuti – Caasimada…
Muqdisho (Wararka Maanta) –Guddoomiyihii hore baaralamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo hadal ka jeediyey munaasabad maanta lagu sagootinayey safiirkii dalka Jabuuti u joogay Soomaaliya ayaa raali gelin u diray Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabkiisa reer Jabuuti.
Aadan Xasan Aadan oo sanadihii lasoo dhaafay madax ka ahaa safaaradda ay dowladda Jubuuti ku leedahay Soomaaliya ayaa maanta laga sagootiyey Muqdisho, maadaama uu dhamaaday mudo xileedkiisii safiirnimo.
Prof. Jawaari oo qeyb ka ahaa madax kasoo qeyb gashay munaasabadii lagu sagootinayey safiirka ayaa dhowr tilmaamood ka bixiyey xiriirka iyo mudnaanta ay Jabuuti siisay Soomaaliya waayihii adkaa.
Wararka Maanta : Wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaano hoostaga...
“Anigoo ku hadlaaya magaca odayaasha Soomaliyeed ee madaxa cad, Madaxweynaha dalka Jabuuti waxaan leenahay aad iyo aad baan galad kuugu heynaa, wax Alla waxii gardarro ah ee aad naga sheeganeyso ka raali ahoow,” ayuu yiri Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Sanadihii uu hoggaanka Soomaaliya hayey Maxamed Cabdullahi Farmaajo waxaa xumaa xiriirka dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti, waxuuna Farmaajo Jabuuti ka soo dhaweystay Ertirea oo waligeed aheyd cadawga reer Jabuuti, arrintaas waxaa aad uga carooday madaxda iyo shacabka reer Jabuuti.
Guddoomiye ayaa sheegay in dalalka caalamka iskadaa walaalnimee ay isugu hiiliyaan derisnimo, “Jabuuti wax kasta waa noo tahay, waa dhiigeenii, waa deriskeenii, waa dhaqankeenii, waa luuqadeenii, isku mid ayaan nahay, waana dowladda kaliya ee wax kasta noo gashay,” ayuu yiri Jawaari.
Wararka Maanta : Mareykanka oo ku dhowaaqay xayiraado ka dhan ah Ethiopia - Wararka Maanta
Sidoo kale safiirka waqtigu ka dhamaaday ee Jabuuti ayuu ku amaanay intii uu joogay Soomaaliya inuu muujiyey shaqo wanaag iyo walaalnimo, isagoo aad ugu mahad celiyey.
“Mar kasta Madaxweyne Ismaaciil waxuu noo soo xulaa, dadka xulka ah ee reer Jabuuti oo safiir uu nooga soo dhigaa, waxaana hadda ka rajeyneynaa in mid adiga oo kale ah inuu noo soo diro, anigu waxaan qorsheynayey in Sabtiga soo socda aan Jabuuti tago oo Madaxweynaha dhaho war inta doorashada aan ku jirno safiir Aadan noo daa hanoo sii joogee, laakiin waxaa la yiri waa sharci hadii waqtigu ka dhamaaday inuu baxo,” ayuu yiri guddoomiye Jawaari.
Wararka Maanta : Saraakiil Shabaab oo lagu dilay Gobolka Jubbada Hoose
Sidoo kale Jawaari ayaa Danjire Aadan Xasan ka codsaday inuu noqdo safiir u maqan Soomaaliya oo akhbaar wanaagsan uga gudbiya dalkiisii Jabuuti ama dalkii kale ee loo diro.
Related Topics:CaasimadaDaawodirayFeaturedgelinJabuutiJawaariMadaxweynaharaaliWararka Maanta
KENYA oo billowday ‘inay hubeyso’ qaar ka mid ah beelaha Jubaland + Sababta…
Daawo: Xasan Sheekh oo shaaciyey in la iibsaday askartii loo qaaday Ertirea…
Deg Deg: Md Farmaajo oo fashiliyay RW Rooble, Go’aanka Siyaasiyiinta S/Land…
Coca-Cola oo Balaayiin Doollar Ku Weyday Fal uu Cristiano Ronaldo Sameeyay Awgii
Gen. Biixi oo sheegay xilliga dalka lagu soo celin doono dhalinyarada …
Saul Niguez Oo Ka Tagaya Atletico Madrid Xilli Manchester United, Liverpool…
Khatarta Hubka Remote-ka Laga Rido & Dadka Caanka Ah ee Lagu Dilay |…
Somaliland iyo Taiwan oo kala saxeexday heshiis caafimaad
Muqdisho (Wararka Maanta) – Taliyaha ciidanka dhulka ee militeriga Soomaaliya Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi oo wax laga weydiiyey arrinta dhalinyarada tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ee warkooda lala’yahay ayaa sheegay in dhalinyaradaas iyo kuwo tababar u jira dalal kale oo caalamka ah dib loo soo celin doono markii ay soo dhameystaan tababarrada u socda.
Taliyaha oo u waramay Radio Muqdisho ayaa ka meermeeray inuu si toos ah uga warbixiyo dhalinyarada la weysan yahay ee dowladdu u qaaday dalka Eritrea, balse waxa uu si adag u beeniyey in ciidan Soomaaliyeed oo tababar ku maqan ay ka dagaalameen dal kale.
Wararka Maanta : Ciidamada Israel oo markale duqeyn ku bilaabay dhulka Falastiiniyiinta - Radio...
“Xaqiiqadu waxay tahay ciidan uu dal tababar u dirsaday, wadan kale dagaal ma geli karo, boqolaal kun oo ciidan ayuu leeyahay dalka Eritrea, marka waxaba ugama baahna ciidan dal kale, cid u ogolaaneysana maba jirto, marka waa been, mana dhici karto in ciidankeenii uu dagaal galay,” ayuu yiri Jeneraal Biixi.
Sidoo kale waxa uu sheegay Taliye Biixi in dowladdu ay soo celin doonto ciidamada tababarrada uga maqan dalka markii ay dhameystaan tababarkooda, isagoo waalidiinta Soomaaliyeed ugu baaqay inay is dejiyaan oo aysan rumeysan wararka suuqa ku jira.
Wararka Maanta : DF oo shaacisay inaysan jirin taliyeyaal ciidan oo la bedelayo kadib dalabkii...
Maalmihii la soo dhaafay waxaa cirka isku shareertay cabashada waalidiinta Soomaaliyeed ee carruurtooda tababarka loogu qaaday dalka Eritrea, kuwaas oo war iyo wacaal toona laga waayey, dowladuna ay dhagaha ka fureysatay in jawaab waafi ah ay ka bixiso nolosha ama geerida dhalinyaradaas.
Hadal heynta iyo baadigoobka dhalinyaradaas ayaa soo cusboonaatay todobaadkii hore markii hey’adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan Qaramada Midoobey ay soo saartay warbixin sheegeysa in ciidan Soomaaliyeed oo laga keenay dalka Eritrea ay ka dagaalameen gobolka Tigray ee waqooyga dalka Itoobiya.
Wararka Maanta : Deg Deg: Xogta Isbadalka ku yimid DF, Go’aanka RW Rooble & MD Farmaajo oo...
Hoos ka dhageyso wareysiga
Arbaco, Juun, 16, 2021 (Wararka-Maanta)- Somaliland iyo Taiwan ayaa kala sexeexday heshiis caafimaad oo dib loogu casriyaynayo isbitaalka guud ee Hargeysa, isla markana lagu keenayo dhakhatiir Taiwanese ah.Warbixin laga soo saaray heshiiska ayaa lagu yidhi” Heshiiskan waxa si weyn loogu casriyeyn doonaa Cisbitaalka Guud ee Magaalada Hargeysa, Sidoo kale waxa Cisbitaalka ka hawl-gali doona dhakhaatiir waaweyn oo dalka Taiwan ka socda oo si rasmi ah uga shaqayn doona Cisbitaalka”.
Labada dhinac ayaa sidookale kala sexeexday in Taiwan ay tababarto boqolaal howl wadeeno caafimaad ah isla markaana maal galiso dhismayaal cusub oo lagu kordhindoono isbitaalka wayn.
Wararka Maanta : Maxaa kasoo baxay kulankii Midowga Afrika ee is-mari waaga doorashada Soomaaliya? - Wararka Maanta
Waxa kale oo lagu heshiiyay in Taiwan ay ka shaqayso horumarinta caafimaadka guud ee Somaliland.
Wajiga koobaad ee heshiiska ayaa socon doona mudo 5 sano ah kadibna dib u cusboonaysiin ayaa lagu samayn doona.
Dhinaca Somaliland waxa heshiiska u saxeexay wasiir ku xigeenka Arrimaha dibada Libaan Yusuf Cisman dhinaca Taiwan na wasiirka arrimaha dibada Joseph Wu.
Turkiga oo farriin usoo direy dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed – Caa…
Ankara (Wararka Maanta) – Dowladda Turkiga ayaa si adag u cambaareeysay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee shalay lagu weeraray Xerada Tababarka Janeral dhega-badan ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac badan.
War qoraal ah oo kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda Turkiga ayaa lagu sheegay inay aad uga xun tahay dowladda qaraxaas, oo ay ku naf waayeen ku dhawaad 20 ruux oo u badna dhalinyaro.
“Waxaan si adag u cambaareyneynaa weerarkii foosha xumaa ee argagixiso ee lagu bartilmaameedsaday ciidamada Xooga Dalka Soomaaliyeed, waxaana tacsi tacsi tiiraanyo leh u direeynaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, waxaan u rajeynaynaa in Alle u naxariisto kuwii ku naf waayey weerarka,” ayaa lagu yiri qoraalkaas.
Qoraalka Wasaaradda Arrimaha dibadda Turkiga ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay inay dowladdooda sii wadi doonto garab istaagooda ku aadan dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ee dagaalka qaraar kula jira argagixisada Al-Shabaab.
Qaraxa oo ahaa nooca is-miidaaminta oo shalay ka dhacay xerada ciidamada General Dhaga Badan oo ku taalla Ex Warshaddii hore ee Nac-Naca ee degmada Wadajir.
Qaraxa ayaa waxaa fuliyey qof isku soo xiray walxaha qarxa, kaas oo beegsaday dhalinyaro loo qorayey ciidanimo, si loogu tababaro gudaha xeradaasi.
Wararka Maanta : Arrin uu saadaaliyey Daahir Geelle inay qabsan doonto Farmaajo oo dhab noqon rabta...
Wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay afaafka hore ee xerada, xilli ay saf ku jireen askarta cusub oo loo diyaarinayey ka mid noqoashada ciidamada Gorgor.
Sidoo kale qofka is qarxiyey ayaa la sheegay inuu iska soo dhigay dhalinyarada dooneysa inay qortaan ciidanimada, isla-markaana uu is qarxiyey, marka uu soo galay safka.
Dadka ay qaraxa shalay waxyeeladu kasoo gaartay ayaa ahaa dhalinyaro safaf ugu jiray inay qortaan ciidanimada oo ku sugnaa gudaha xeradaas.
Wararka Videos45 mins ago
Warka Caalamka3 hours ago
Warka Ciyaaraha5 hours ago
Caalamka Videos6 hours ago
Wararka Somali3 days ago
Gabar Soomaali ah oo qaab aad loola yaabay loogu dilay magaalada…
Xog: Rooble iyo madax goboleedyada oo ku wajahan Kismaayo + Ujeedka – …
Deni oo la kulmay wafdi ka socday Hay’adda Laanqayrta Cas…
Warka Ciyaaraha5 days ago
Liiska: Magacyada Sagaal Ciyaartooy Oo Liverpool Iibineyso Xagaagan Suuqa…
Wararka Somali4 days ago
Raysal wasaaraha Soomaaliya iyo Wakiilka Qaramada Modoobay oo ka wadahadlay…
Arsenal Iyo Tottenham Oo Ku Dagaalamayaan Daafaca Lyon Joachim Andersen.
Badmaaxiin la socotay Markab Xamuul oo ku degay Xeebaha Somalia – Radio…